Dhibee Iboolaa: Itoophiyaan akka vaayirasiin kun biyya hin seenne maal gochaa jirti? - BBC News Afaan Oromoo
Dhibee Iboolaa: Itoophiyaan akka vaayirasiin kun biyya hin seenne maal gochaa jirti?
Ministeerri Eegumsa Fayyaa Itoophiyaa vaayirasiin Iboolaa Rippabilika Dimokiraatawa Koongoo keessatti mul'ate akka biyya hin seenne to'annoo cimaa gochaa jiraachuu beeksiseera.
Ministirri Eegumsa Fayyaa Dr. Amiir Amaan ogeessota fayyaa 200 ta'an waggoota dura biyya Rippabilika Dimokiraatawa Koongoo deemanii tajajilaa turan akka muuxannoo yeroo sana argatan warra kaaniif qoodan taasifamuu FBC'n gabaaseera.
Iboolaan bara 2014 Rippabilika Dimokiraatawa Koongoo mul'atee kan ture bara kanas deebi'ee tatamsa'aa jiraachuu kaasanii, kanaan walqabatee Itoophiyaan ammoo qophii of eegannoo addaa ittiin to'atamu taasifteetti jedhan Dr. Amiir.
Iboolaan akka haaraatti DR Koongootti mul'ate sodaa umee
Haaluma kanaan buufataaleen idil-addunyaa afuriifi ulaawwan 33 gara biyyattiitti seensuufi baasu hunda irratti to'achuuf qophii duraa xumuruu ibsuun, sakatta'insa gaggeessuun jalqabamuu isaallee dubbataniiru Ministirichi.
Torban darbe keessa Dhaabbanni Fayyaa Idil-addunyaa vaayirasii Iboolaa Dimokiraatik Rippabilik Koongoo keessatti dhalateen walqabateen dhibeen kun yaaddoo fayyaa addunyaa akka ta'e ifa gochuun isaa ni yaadatama.
Vaayirasiin Iboolaa Dimokiraatik Rippabilik Koongoo keessatti bara 2014 keessa biyyattii baka Gomaa jedhamtutti mul'ate hanga bara 2016tti namoonni 11,000 akka dua'aniif sababii ta'uu dubbatan.
Haala kanaan walqabatee keessattuu Daandiin Xiyyaara Itoophiyaa torbaniitti guyyoota torba gara Gomaatti waan balalii taasisuuf of eeggannoon addaa akka taasifamuuf hojjetamaa jiras jedhaniiru.
Ministirichi karrawwan gara Itoophiyaa seensaniifi baasan karaa Somaalii Laan, Sudaaniifi Sudaan Kibbaa of eeggannoo barbaachisu taasisuudhaafqophiin taasifamuu addeessan.
Yeroo ammaa Vaayirasiin Iboolaa Koongoorra darbee Ameerikaafi Ispeenitti uumamuu isaa kan kaasan Dr. Amiir, gara Itoophiyaatti akka seenne hojiin hojjetamaa jiraachuu dubbatan.
Kanarra dabeellee vaayirasiin kun yoo biyya keessatti argameef jecha of eeggannoo taasisuuf naannoo Gaambeellaafi Finfinneetti buufanni fayyaa tokko guutummaan guutuutti qaphaa'uu eeraniiru.
Vaayirasii kana ittisuudhaaf mootummaan Birrii Miliyoona 250 ramadee hojiiwwan of eegannoo hojechaa jiras jedhaniiru Dr. Amiin.
Hawwaasnis mallattoo qaamni akka malee gubuufi mallattoowwan biroo adda ta'e yeroo mul'atan atattamaan gara dhaabbileen fayyaa deemuudhaan ilaalamuu akka qabus akeekkachiisaniiru.
'Balaa fayyaa hawaasaa hatattamaa yaaddoo idil-addunyaa uumu' jedhanii labsuun akeekkachiisa isa dhuma WHO'n labsuu danda'u yoo ta'u ammaan dura yeroo afur qofa labsame.
DR Kongootti namoonni 2,000 dhibee Iboolaan qabaman
DRC'tti namoonni Ibooolaan du'an 1000 caalan
Tokko bara 2014 hanga 2016 wayita weerarri Iboolaa biyyoota Lixa Afriikaa keessatti namoota 11,000 ajjeese kan labsame.
"Yeroo addunyaan hubachuu qabudha," jedhan hogganaan WHO Dr Tedroos Adihaanoom Roobii ibsa Jenevaatti kennaniin wayita labsii kana himan.
Buufataalee xiyyaaraa fi galaanaa namoonni qaxxaamuran irratti qorannoo taasisuun hafee imallii fi daldalli akka adda citu yaadni furmaata akka dhiyaateefis himaniiru.
Federeeshiniin Hawaasa Fannoo Diimaa fi Baatii Diimaa Idil-addunyaa murtee WHO kana deeggareera.
RD Koongoo: Iboolaan balaa fayyaa addunyaa furmaata hatattamaa barbaadu jedhamee labsame
MM Abiy Ahimed Pirezidaantii Kooriyaa Kibbaa waliin mari'atan
'Nutti hin Iyyiin' jedhanii akeekachiisaa turan
Biyyoonni G7 ibidda Amaazoon dhaamsuuf